डा. केसीको चेतावनी : आयोगको विपरीत बिएन्डसीलाई सम्बन्धनको प्रक्रिया बढाइए सत्याग्रह सुरू – Health Post Nepal
२०७८ जेठ २७ गते १२:०४
चिकित्सा क्षेत्रका अभियान्ता डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरूको अडान विपरीत बिएन्डसी मेडिकल कलेजको सम्बन्धनको प्रक्रिया अघि बढाइए सत्याग्रह गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
चिकित्सा शिक्षा आयोगमा बिएन्डसी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन प्रक्रिया विचाराधीन छ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयले सम्बन्धन अघि बढाउन सिफारिस गरेपछि त्यसबारे निर्णय लिन आयोगको बैठक बस्न खोजिरहेको छ।
‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गुण्डाराजलाई साथ दिने जो कसैलाई पनि जवाफदेही बनाउन हामीले कुनै कसर बाँकी राख्नै छैनौं,’ डा. केसीले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले नै अवैध कार्य गराउने यस्तो कार्य विधिको शासनविरुद्धको अक्ष्यम्य अपराध हो।’